Juventus oo baddeshay qorshaheedii ku aaddanaa mustaqbalka Paulo Dybala & sababta ka dambeysa oo la ogaaday – Gool FM
Juventus oo baddeshay qorshaheedii ku aaddanaa mustaqbalka Paulo Dybala & sababta ka dambeysa oo la ogaaday
(Turin) 31 Maajo 2021. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa muddooyinkii dambe xal u raadineysay mustaqbalka laacibka weerarka ka ciyaara ee Paulo Dybala kaasoo lala xiriirinayay in xagaagan laga iibin doono kooxda reer Taliyaani.
Dybala ayaa haatan lagu soo warramayaa inuu Juve kala xaajoonayo inay heshiiska u kordhiyaan si uu baaqi ugu sii ahaado Allianz Stadium, waxaana taasi ay dhabar jab xoog leh ku tahay kooxo dhowr ah oo doonayay saxiixiisa.
Qandaraaska uu laacibka reer Argentina kula joogo Bianconeri ayaa ay ka harsan yihiin 13 bilood, waxaana lagu soo warramayaa inay haatan labada dhinac ka wada hadlayaan in heshiiskaas la cusbooneysiiyo.
Sida wararka ka imaanaya dalka Taliyaaniga ay sheegayaan, macallinka cusub ee Juventus, Massimiliano Allegri ayaa dalbaday in la xalliyo arrimaha heshiis kordhinta ee Dybala sida ay daabacday Goal, waana sababta ay kooxda ugu guulaha badan Serie A haatan u dardar gelineyso hubanti ka dhigista mustaqbalka xiddigan.
Yeelkeede, horraan ayay burbureen wada hadallo dhex maray 27-sano jirkan iyo The Old Lady, balse haatan, waxaa miiska wada xaajoodka dib ugu soo celiyay macallin Allegri oo taageere weyn u ah xiddiga reer Argentina.
Paulo Dybala ayaa xilli ciyaareedkan 2020-21 ku dhammeystay si adag isagoo 21 ciyaarood ku seegay dhaawacyo iyo xanuunno kale, waxaana wadar ahaan uu saftay 26 ciyaarood dhammaan tartammada isagoo dhaliyay shan gool oo qura sidoo kalena caawiye ka noqday saddex kale.
Arsenal oo bartilmaameedsaneysa laba saxiix oo muhiim ah xagaagan & mid ka mid ah xiddigaha ay dooneyso oo u ciyaara Manchester City